Culimada Galdogob oo ku baaqay in laga qayb qaato Dhismaha Dugsiga Hooyo ee Galdogob “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Culimada Galdogob oo ku baaqay in laga qayb qaato Dhismaha Dugsiga Hooyo ee Galdogob “SAWIRRO”
Dugsiyada Hooyo oo ay gacanta ku hayso Jamciyada Samafalka ee Hooyo ayaa waxaa waxay kamid yihiin Dugsiyada ka qayb qaata kor uqaadida wacyiga Hooyooyinka ee ku aadan Xifdinta Qur’aanka iyo Barashada Diinta.
Culimada Degmada Galdogob oo ay kamid yihiin:-
1.Sh.Mahad C/laahi Sheekha Magaalada Galdogob.
2.Sh.Axmed Maxamed Faarax (Dheeli) Gudoomiyaha Mu’asasada Al-Minhaaj (Galdogob).
3.Sh.C/salaam Yuusuf Xaaji Maamulaha Dugsiga H/Dhexe Sare ee Galdogob.
4.Macalin Mustafe Yuusuf C/kariim Gudoomiyaha Macalimiinta Dugsiyada Hooyo waxaa ay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa ugu baaqeen inay ka qayb qaataan Mashruuca Jamciyada Hooyo, gaar ahaan Dugsiga Hooyo ee Galdogob laga dhisayo, iyagoo xusay in la arkay miraha iyo faa’idada Dugsiyadaasi oo ay ka aflexeen Hooyooyin Soomaaliyeed oo fara badan.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug waxaa ku yaala 9 Xarumood Xarumo kalana waxaa ay ku yaalaan Xarfo , Bacaadwayn iyo Bursaalax Xaruntii 13 ayaa waxaa haatan Hawlgalkii Dhismeheedu uu ka socdaa Degmada Galdogob.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawadda oo xafiis ka furatay degmada Jowhar
Shaqaale ka tirsan Wasaaradda Shaqada oo tababar loo furay